Itoobiya: Akhriso 9 Arrin oo Kicisay Xiisadda Abiy Axmed iyo Tigrayga – Goobjoog News
Duqeyn iyo dagaal adag oo u dhaxeeya ciidamada federaalka ah iyo kuwa Tigray-ga ayaa iminka ka socda waqooyiga Itoobiya, arrintan oo cabsi badan gelisay dalalka gobolka ayna baaqyo xabad joojin ah ka soo saareen beesha caalamka.
Ra’isul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo hadlayey ayaa sheegay iney duqeeyeen goobo ay Tigraygu madaafiic ku keydsanaayeen, arrintan oo jawaab u aheyd tallaabo ay ciidamada Tigrayga arbacadii kula wareegeen xarun militari oo ay laheyd dowladda federaalka ah, hubna kala baxeen.
Saraakiisha Tigray-ga waxaa ay dagaalkaasi kadib go’aansadeen iney xiraan hawada sare, isu socodka dadka iyo gaadiidka, waxay kale oo sheegeen in ciidamo ka tirsan waqooyiga Itoobiya ay ka soo goosteen federaalka ah, kuna biireen Tigray-ga iyaga oo u hiilinaya shacabkooda.
Bilihii ugu dambeeyey waxaa socday isjiijiid u dhaxeeya dowladda federaalka ah ee Itoobiya iyo Tigrayga. Haddaba Goobjoog News ayaa dib u raacday, waxa keenay iney isku dhacaan labada dhinac.
Halkan Hoose Ka Akhriso 9 Qodob oo Tigray-gu Diidan Yihiin:
1. Federaalka oo Maamul Cusub u Dhisay Dadka Tigray-ga: Dowladda federaalka ah ee uu hoggaamiyo Abiy Axmed marka laga soo tago iney weerartay gobolka Tigray-ga waxaa ay sidoo kale maanta oo sabti ah sheegtay iney maamul cusub u dhisayaan gobolkaasi, iyada uu ansixiyey baarlamaanka, lana sugayo magacaabista maamul cusub saacadaha soo socda.
2. Abiy Axmed oo Ay u Hesytaan Federaal Diid: Gobolka Tigray-ga waxaa uu diidan yahay hadafka Abiy Axmed ee dalka uu rabo inuu ka hirgeliyo nidaam dowlad dhexe oo xoog leh isaga oo laalaya nidaamka federaalka ah.
3. Tigraygu Ma Ogola Isu soo Dhowaanshiyaha Abiy iyo Afwerki: Gobolka Tigray-ga, waxaa kale oo ay diideen heshiiska uu Abiy Axmed la galay dhiggiisa Eritrea Isaias Afwerki iyo dhulka uu ku wareejiyey heshiiska kadib.
4. Sidee Loo Baabi’in Karaa EPRDF? Tigeryga waxaa ay iska diideen ka mid noqoshada xisbiga cusub Prosperity Party kaas oo uu Abiy Axmed dhisay kadib markii uu baa’biyey EPRDF oo ahaa isbaheysi taariikhi ah oo soo jiray ilaa 1988, madaxda uu ka ahaa wiilkooda Meles Zenawi 1991-2012. Mar haddii Tigraygu yihiin 6% dadka Itoobiya waxaa gashay cabsi, waana iska diideen in laga guuro EPRDF.
5. Muranka Lacagta Cusub ee Birrta: Abiy Axmed isaga oo sheegaya inuu la dagaalayo musuqa ayuu qarash gareeyey $101.2 million si uu u sameeyo lacag cusub, ujeedka waxaa uu ahaa inuu meel saaro maalqabeenka Tigrayga, arrintaas oo ay sidoo kale xummaan u arkeen.
6. Abiy Waqtigiisu Waa Dhacay, Doorashana Ma Rabo: Abiy Axmed waxaa uu waqtigiisu ku ekaa October 2020, waxaa uu dhowr jeer dib u dhigay doorashooyinkii dalka ka dhici lahaa isaga oo ku marmarsiyoonaya Covid 19, waxaa kale oo uu diiday inuu dhiso dowlad wadaag, waxaa uuna doonayaa inuu sii joogo doorasho la’aan sanado kale, arrintan waxaa aad uga horyimid Tigrayga.
7. Doorashada Deegaanka Tigreyga: Itoobiya waxaa uu doorashada Tigraygu qabsadeen September u arkeen mid sharci darro halka iyaguna ay difaacdeen xuquuqdooda dastuuriga ah.
8. Qarashkii Laga Jaray: Doorashada Tigrayga ee September kadib, dowladda federaalka ah waxaa ay qarashkii ka jartay maamulkaasi iyada oo ciqaab uga dhigeysa tallaabada uu gobolku qaaday.
9. Goonni Isutaagga Tigrayga: TPLF hoggaamiyeheeda Debretsion Gebremichael waxaa uu August sheegay in anaey ka gorgortameyn gooni isu taag uu xaq u siinayo dastuurka dalkaasi, arrintan oo federaalka ah u arkaan caasinnimo iyo mid horseedi karta kala tag.